प्रभु इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, १६ जेठ २०७६)
यस कम्पनीले बीमा समितिले तोकेबमोजिम रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी पु¥याइसकेको छ । हाल रू. १ अर्ब ५० लाख ७६ हजार चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा रू. २३ करोड ९४ लाख ७२ हजार छ । बीमा कोषमा रू. ५१ करोड ३० लाख ७० हजार र महाविपत्ति जगेडामा रू. ७ करोड १८ लाख ७० हजार छ ।
यस वर्षको ९ महीनासम्ममा रू. ७० करोड ८७ लाख ७ हजार कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको कम्पनीले यस अवधिसम्म ५३ हजार ९०९ बीमालेख जारी गरेको छ । तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले रू. १४ करोड २ लाख ५४ हजार खुद नाफा गरेको छ । बुधवारको कारोबारमा कम्पनीको शेयरमूल्य मंगलवारभन्दा ३ अंक बढेर रू. ४०८ कायम भएको छ ।
2019-05-30 - 179 view(s) - abhiyan